Wararkii ugu dambeeyey shirka arimaha Soomaaliya ee magaalada Istanbul – SBC
Wararkii ugu dambeeyey shirka arimaha Soomaaliya ee magaalada Istanbul
Shirweyne caalami ah oo ay ka qayb galayaan madax ka kala socota 54 dawladood oo kala ah Madaxweyneyaal, Ra’isalwasaarayaal, Wasiiro & wakiilo dal kuwaasi oo daneynaya Soomaaliya gaar ahaan arimaha siyaasada, amaanka, dhaqaalaha iyo maalgashiga ayaa maanta ka furmay magaalada Istanbul ee caasimada dalka Turkiga.
Kulanka ee maanta furmay ee shirkan waxaa diirada lagu saarayaa taageerada Soomaaliya, dib u dhiska dalka, Biyaha, caafimaadka, waxaana ka qayb qaadanaya ergooyin ka socda dawlada KMG Soomaaliya, Qaramada Midoobay, deeq bixiyeyaasha, Soomaalida iyo Ajanabiga Mihnileyda gaarka ah, bulshada rayidka, Ururada haweenka, dhalinyarada iyo qurbo joogta.
Maalinta labaad ee shirka oo ah maalinimada beri waxaa shirka si wadajir ah u martigalinaya Ra’isalwasaaraha Turkiga Mr. Recep Tayyip Erdoğan & xoghayaha guur ee Qaramada Midoobay Mr. Ban Ki-Moon, waxaana looga hadli doonaa Siyaasada, amaanka iyo horumarinta dhaqaalaha, waxaana la filayaa in ugu dambeynta shirka laga soo saaro warmurtiyeed.
Ra’isalwasaaraha Soomaaliya Cabdiwali Maxamed Cali Gaas oo furintaankii shirkii maanta ka hadley wuxuu ugu horeyn u mahadceliyey dawlada Turkiga sida wanaagsan ee ay u taageerayso Soomaaliya iyo shirkan ku saleysan aayaha Soomaaliya ee ay soo qabanqaabisay.
Cabdiwali Gaas wuxuu farta ku fiiqay in madaxda iyo siyaasiyiinta Soomaalida ay diyaar u yihiin in ay dalka ka saarana dhibaatada ayna isagu keeni lahaayeen ummada Soomaaliyeed.
Ra’isalwasaare kuxigeenka Turkiga Baker Bostog oo khubad ka jeediyey Furitaanka shirka arrimaha Soomaaliya looga hadlayo ee magaalada Istanbul ayaa ku tilmaamay shirkan iyo dadaalka haatan socda in Soomaaliya gaartay waddadii ay uga bixi lahayd dib u dhac, isla markaana ay ku gaari lahayd heerkii looga baahnaa.
Sidoo kale Mr. Baker Bostog ayaa tilmaamay in dowladda Turkey ay qaadaneyso doorkii looga baahnaa, oo ay sii wadi doonto taageerrada ay la garab taagan walaallaha Soomaaliya, isagoo sheegay in uu shirkan ka rajeynayo in uu noqdo midkii ugu dambeeyay ee ay Soomaalidu uga bixi lahayd waqtiga kumeel gaarnimada iyo dib u dhaca.
Insha ALAAH waxaan idiin soo gudbin doonnaa warbixinada, sawirada & muuqaalada shirkan, si aad ula socota wararka ugu dambeeya ee shirka isha ku hay SBC Online.
Leyla Cismaan Jamaac
Asalaamu calaykum layla.waad ku mahadsantahay isticmaalka kalmada (insha.alaah)